अमेरिका जाने दिन नै घरमा मृxत फे,ला परेकी अनिता,कारण के ? खुल्यो यस्तो र,ह,स्य,(भिडियो हेर्नुहोस्) – Dainik Sangalo
अमेरिका जाने दिन नै घरमा मृxत फे,ला परेकी अनिता,कारण के ? खुल्यो यस्तो र,ह,स्य,(भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २५, २०७८ समय: १०:४५:४९
असोज २५ गते शनिबार राती ९ बजे अनिताको अमेरिकाको फ्लाइट थियो । उनका श्रीमान अमेरिकामै बस्दै आएका थिए । त्यसै अनुरुप उनी पनि श्रीमानसगैँ बस्न अमेरिका जान लागेकी थिइन । तर २० गते दिउँसो करिब २ बजे तिर उनी आफ्नै कोठामा पं’खामा झु’न्डि’एको अवस्थामा मृxत फे’ला परिन । मृ’xत्यु पछि उनका कोठामा नो’ट भेटिएको छ । सबै आफ्ना कुराहरुको नो’ट बनाएर लेख्ने बानी गरेकि अनिताले आफ्नो घरमा आफू माथी हुने गरेको ब्याबहारको बारेमा पनि नोटमा लेखिकी छिन ।
रुपन्देही जिल्लाको बुटवल स्थित देबिनगरकी अनिता रेग्मी करिव तीन वर्ष अघि बुटवल नजिकै ढवाह बस्ने सुमन खनालसगँ बिबाह भएको थियो । परिवारबाटै उनिहरुको मागी बिबाह भएको थियो । बिहे भएको एक महिना मै अनिताका श्रीमान सुमन अमेरिका गएका थिए । त्यस पछि एक पटक नेपाल आएका सुमनले अनितालाई पनि अमेरिका लैजाने प्रक्रिया थालेका थिए । अमेरिकामा नेपाली गरगहनाको निकै महत्त्व भएकोले अनिताले आफ्ना गरगहना लिएर जाने तयारी गरेकी थिइन । तर उनकि सासुलाई त्यो कुरा मन परेन । सोही कारण उनलाई विभिन्न मानसिक त’नाव दिएकोले यो घ’ट,ना भएको उक्त नोटबाट बुझ्न सकिने अनिताका माइती पक्षको भनाई छ ।
अनिताद्वारा लेखिएको त्यो नोटले यो घ,ट,नालाई झन र’ह’स्यमय बनाएको छ । यो सब हुनुमा अनिताको घरकै परिवारजनको हात हुनसक्ने कुरामा शं’का गर्ने ठाउ भने प्रशस्त रहेको छ । अनिताका माइतीपक्षले यो ह’त्यामा घरभित्रकै मान्छेको हात रहेको र षड्यन्त्रपुर्बक मारिएको कुरा पनि बताएका छ्न तर अनिताका घरका भने यो मान्न तयार छैनन ।
अनिताको आफ्नो श्रीमानप्रती भने कुनै गु’ना’सो नरहेको कुरा नोटबाट स्पष्ट हुन्छ तर उनले श्रीमानको परिवारबाट पाउनुपर्ने माया भने कहिल्यै नपाएको बताएकी थिइन । कहिले पैसा कहिले सुन त कहिले दाइजोको नि’हुमा अनेकतरहबाट मानसिक त’ना’ब दिएको कुरा उनको नोटबाट स्पष्ट हुन्छ । रोजिनाकी नन्दले भने भाउजु राम्रैसङ बोल्ने र माया गर्ने गरेको कुरा बताइन ।
अनिताका परिवारले घटना कसरी घटेको थियो भन्ने कुराको पनि बेलिबिस्तार लगाएका छ्न । अमेरिका जाने तयारी गरिरहेकी उनी यसरी आफ्नै कोठाको फ्यानमा सलको पा’सो लगाएर झु’न्डि’एको देख्दा वा सुन्दा पक्कै पनि हाम्रो ध्यान यसले खिच्छ नै । अमेरिका गएर नर्सिङ पढ्ने सपना बोकेकी उनिमाथि एकाएक यस्तो घटना घट्दा उनका श्रीमान भने म’र्नु न बाच्नुको स्थितीमा छन । उनको कोठाको भित्तामा टासिएको पढाइसम्बन्धी पोस्टरहरुले उनको पढाइप्रतिको लगन स्पष्ट झल्किन्छ ।
अनिताका ससुराभने कामको शिलशिलामा काठमाडौंमा रहेको र घरमा नरहेको कुरा उनले बताए । बुहारीलाई ऐयरपोर्टमा बिदाइ गर्न तयार भएका ससुराबा भने बुहारीको मृ’त्युुको यो घटनाले झन्डै फे’न्ट भएको कुरा पनि स्वयम् ससुराले नै बताए । बुहारीले यस्तो गर्नुमा म त केही कारण नै देख्दिन भन्छिन ससुरा । टिका मुछिइसकेको अबस्था छ, अनितालाइ बिदाइ गर्न सम्पुर्ण तयारी भैसकेको अबस्था छ तर अन्तिम घडिमा घटेको यो घटनाले र’ह’स्यमाथी र’ह’स्य थप्दै गएको छ ।बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा
Last Updated on: October 11th, 2021 at 10:45 am